ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » နွေရာသီ Doggie ရှေ့တွင်၏မှုကို Leslie ရဲ့ထိပ်ဆုံးဆယ် Dos and DON'Ts
အားဖြင့် Leslie Schnur
နွေရာသီ Doggie ရှေ့တွင်၏မှုကို Leslie ရဲ့ထိပ်ဆုံးဆယ် Dos and DON'Ts
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 08 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
အကောင်းကိုခွေးအပြုအမူအားလုံးတစ်နှစ်ပတ်လုံးအရေးကြီးပါတယ်, ဒါပေမယ့်ခွေးကသူတို့ leashes နှင့်လူမျိုးကိုပယ်ကြသောအခါပူနွေးသောရာသီဥတုဝေဖန်ဖြစ်လာ, ထုံးစံအတိုင်း, သူတို့ရဲ့ရော့ခ်ပယ်များမှာ. ခွေးတစ်ကောင်ကိုနှင့်လူသားများမြက်ခင်း sharing ကြသောအခါ, ပင်လယ်ကမ်း, Frisbees နှင့်တောင်တက် Trails, နှစ်လောကကွဲသွားရင်. ငါတစ်ခုထက်ပိုကြည့်ရှုပါကတစ်ဦးနေသာသောနေ့ဖြစ်၏ကြောင့် Rottweiler ရိုးရှင်းစွာလှည့်ပတ်ထိန်းချုပ်မကျင်လည်ကျက်စားခွင့်ပြုအော်ဟစ်ကြမည်. ထိုနောက်မှငါသည်ခွေးကြိုက်. ဒါဟာသူတို့ကိုလုပ်တော်မူသောမိမိတို့ပိုင်ရှင်တွေမကောင်းတဲ့ကြည့်ရှုမယ့်. ဒါကြောင့်, ပိုင်ရှင်တွေ, ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ခွေးနှင့်သတ္တုတွင်းအဘို့အနွေရာသီရှေ့တွင်ငါ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်.
1. သင့်ရဲ့ခွေးကို pee သင့်အိမ်နီးချင်းရဲ့ hydrangeas အပေါ်မခံပါနဲ့. သင်၏အိမ်နီးချင်းသူမ၏ဥယျာဉ်ကိုပွင့်များနှင့်ခွေးကိုဆီးစေခြင်းငှါအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးအချိန်ကုန်ခဲ့သည်သူမသည်ပန်းပွင့်ယနေ့ရေလောင်းလိုအပ်ဟုလျှောက်သောအခါသူမဘာလုပ်မည်ကိုမဟုတ်ပါဘူး.
2. သင့်ရဲ့ခွေးကိုပန်းခြံမှာမြက်ခင်းပေါ် poop မခံပါနဲ့. (ရှိသမျှကိုငါခွေးကို poop အမြဲကောက်ရရမယ်လို့ပြောလိုအပ်ပါသလား, သင် Alaska ၏ရိုင်းတွင်နေထိုင်မဟုတ်လျှင်? အမေရိကန်တွေသကဲ့သို့သင်တို့ကိုခွေး poop သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်နောက်ဖေး fertilize စေလွတ်လပ်မှုကိုခံစားပျော်မွေ့ကြပါ, ထိုအခါမူကား,, ငါသည်သင်တို့ကိုသိရန်မလိုချင်ကြဘူး။) နွေရာသီကာလအတွင်း, ပန်းခြံမြက်ခင်းပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်, ဘောလုံးကိုကစား, နှင့်အထွေထွေအကြောင်း lolling. တစ်ဦးမြက်ခင်းပေါ်လောက် lolling ပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုအပေါ်တွေ့ရှိရန်လိုလားနောက်ဆုံးသောအရာအချို့အမည်မသိဖြစ်ပါသည်, အချို့အလွန်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်နှင့် smelly ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်ပိုဆိုး.
3. သင့်ရဲ့ခွေးကိုအခြားခွေးကိုအပေါ်သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေသစ် Puma အပေါ် drool မခံပါနဲ့. ဒါဟာကောင်းတဲ့မယ်ကြောင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်င်. (တဦးတည်းမဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆိုနိုင်ကြသော်လည်း $100 တင်းနစ်ဖိနပ်ကိုအနည်းငယ် drool ထိုက်) ထိုအမှတပါး, drooling မကြာခဏရေငတ်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခွေးကိုလုံလောက်သောရေလာပြီဖြစ်ပါတယ်သေချာပါစေ. ဒီတစ်ခါလည်းသူပဲအများကြီး slobbers သောသူတို့အားခွေး၏တင့်. ဘယ်အခြေအနေမှာထဲမှာသူတစ်ဦး Bichon ရေနစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်မီအဝေး drool သုတ်ဖို့သင့်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်.
4. သင့်ရဲ့ခွေးကိုရေကန်ထဲမှာရေကူးပျော်မွေ့ကြကုန်အံ့ရှောင်ရန်များ, သင်မူကား, အဲဒီမှာင်သာဆိုရင်သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့, ရေကန်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်, သင်သည်သူ၏ဆံပင်ကို clean up နှင့်သင်တော်မူသည်သူ၏ပခုံးပေါ်တွင်သင်ရှိတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်သူ့ကိုကြက်သားတိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခွင့်မရကြဘူး.
5. ကမ်းခြေရဲ့ရန်ကိုခွေးကိုယူကြပေမယ့်သူမရဲ့ poop စေထို့နောက်သဲနှင့်ဖုံး NOT ရှောင်ရန်များ. သူမ၏မျက်နှာသည်သို့သဲများပေးပို့ခြင်းလက်သုတ်ပုဝါအုပ်ကို run မခံပါနဲ့. သူမ၏ရေကူးကြကုန်အံ့, ထို့နောက်အနီးရှိ sunbathers သူကိုယ်တိုင်ကိုခါလိုက်ကြလော့ NOT ရှောင်ရန်များ. တရာအကွာကမ်းခြေကိုဆင်းသင့်ခွေးကိုယူနှင့်သူမ၏စိတ်နှလုံးကိုအကြောင်းအရာသူမ၏လှိုင်းကုန်အံ့ရှောင်ရန်များ.
6. သင့်ရဲ့ခွေးကိုရေကူးသင်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်လှောင်ကန်တစ်ခုအတွက်မခံပါနဲ့. ဒါဟာဘက်တီးရီးယားပိုးသို့မဟုတ်ရောဂါသယ်ဆောင်နိုင်. Central Park ရဲ့ Harlem Meer အတွက်မကြာသေးမီကတွေ့သောသူတယောက်လိုမိကျောင်းဖော်ပြခြင်းမ, ခွေးကိုရေချိုးအတွက်ရေပန်းစားတဲ့အစက်အပြောက်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခွေးကိုရေကူးအမည်မသိရေကန်ဝင်ရောက်စေတော်ရှေ့၌, သင်ကအဆင်ပြေမယ့်သေချာရှိပထမဦးဆုံးရေကူး.
7. သင့်ရဲ့ခွေးကိုနှင့်အတူသွားလာကြပေမယ့်ဟိုတယ်ခွေးခွင့်ပြုလို့မယူဆကြဘူး, ဟိုတယ်တွင်လူတိုင်းခွေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို. တကယ်တော့, ဘယ်သူမှခွေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ယူဆ, နှင့်သင်ပြန်ခွင့်ပြုစေမည်အကြောင်း. နိမ့်ဆုံးမှအခေါက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါ (သင့်ရဲ့ခွေးလွန်း), အမြဲတမ်း leash ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ခွေးကိုစောင့်ရှောက်, မကြာခဏသူမ၏လမ်းလျှောက်ရက်ရက်ရောရောလက်တို့.
8. တောင်တက်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ခွေးကိုယူသူမူကား, ပျောက်ဆုံးရမချင်းတစ်ဦးခြေလျင်ခရီးသည်ခလုတ်မပါဘူးဒါကြောင့်တစ်ဦး leash ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ခွေးကိုစောင့်ရှောက်ရှောင်ရန်များ. ဒါဟာ Yosemite ရေတံခွန်ရဲ့ထိပ်ကနေရှည်လျားသောအတက်အကျကိုဖွင်.
9. ပထမဦးဆုံးအိမ်ရှင်တောင်းဆိုနေတာမပါဘဲရေကန်ပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်အသားကင်ဖို့သင့်ရဲ့ခွေးကိုမယူရ. နွေကာလင်ထိုသို့သောအဆင်းလှသောနေ့၌သူမ၏နေအိမ်တွင်ထားခဲ့ဖို့ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပုံရသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့, နေရာတိုင်းတွင်သင်သွားသင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ခွေးကိုမယူရ. သင့်အနေဖြင့်ကားထဲတွင်သူမ၏မခွါနိုင် (ဒါကြောင့်လမ်းလည်းပူလာ), သင်ဝါးမှချည်ထားသောလမ်းဘေးစင်္ကြံပေါ်တွင်သူမ၏မခွါနိုင် (ထို Yelp နှင့်အော်ဟစ်မိဿဟာ disturbs, သင့်ရဲ့ pookie အခိုးခံရရနိုင်ဖော်ပြခြင်းမ). သင်ခွေးတစ်နေရာရာမှာသင့်လျော်တဲ့သွားမထားဘူးဆိုရင်အိမ်မှာသင့်ရဲ့ခွေးကိုချန်ထားပါ. သူမသည်အထီးကျန်ဖြစ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. သူမသည်ကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်. သူမသည်သေးငယ်တဲ့ဆွေးနွေးချက်လုပ်စရာမလိုပါလိမ့်မယ်.
10. သင်သည်သူလည်းပူတယ်ထင်သောကြောင့်သင်ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ဆံပင်မွေးကိုညှပ်ခြင်းမဟုတ်ပါရှောင်ရန်များ. အဲဒီ anthropormorphizing ဟုခေါ်င်, ပါဝင်ပေမယ့်သူ့ကိုတစ် raincoat နှင့်အစရှိသောဝတ်ဆင်ရာတွင်ကန့်သတ်မရှိလှကြောင်း doggie ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတစ်ခုအချို့ကြင်နာသောဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦးကိုခွေးရဲ့ဆံပင်အေးမြသူများပေါ်ပူသောနေ့ရက်နှင့်နွေးထွေးသောအပေါ်အေးမြကစောင့်ရှောက်. (သင်သည်ဤသိမထားဘူးဆိုရင်, သင့်ဒေသခံစာအုပ်ဆိုင်မှအလျင်အမြန်ပြန် သွား. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွေးစောင့်ရှောက်မှုသင်ပုန်းကြီးရကျေးဇူးပြုပြီး, ငါ့အသစ်စာအုပ်နှင့်အတူ, the Dog Walker က